ကားအငျဂငျြခနျးထဲက ဆီငှပွေ့နျဘူးနဲ့ ဆီငှပြေံ့ စနဈအကွောငျး - Myanmar Automobile and Equipment Directory
Probox ကားတှေ ဟိုနရော မီးလောငျ၊ ဒီနရော မီးလောငျတယျ ကွားတော့ Probox ကားပိုငျရှငျတှေ၊ ကားမောငျးသူတှေ၊ ကားအငျဂငျြခနျးထဲက ဆီပွနျဘူးလို့ချေါတဲ့ ဘူးအမဲလေးကို အိတျဇောပိုကျနဲ့ နီးတဲ့နရောကနေ ဝေးတဲ့နရောတှေ လာလာရှကွေ့တယျဗြ ။
ဒီနေ့ ကားအငျဂငျြခနျးထဲက ဟိုနရော ဒီနရောရှတေ့တျကွတဲ့ အမဲရောငျဘူးလေး နဲ့ သူ့စနဈ အကွောငျးပွောပွခငျြပါတယျ။ ကားအငျဂငျြခနျးထဲက အမဲရောငျဘူးလေးကို ဝပျရှော့ဆရာအမြားစုကတော့ ဆီပွနျဘူး၊ ဆီငှပွေ့နျဘူးလို့ချေါကွတယျဗြ (ဆီအငှတှေ့ေ ပွနျလာတယျဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ပါ)။ ဆီ​​ငှပြေံ့ဘူးဆိုရငျလညျးမမှားပါဘူး။
EVAP System အကွောငျး
ဒီဆီငှပွေ့နျဘူးလေး အကွောငျးပွောမယျဆိုရငျ သူနဲ့အတူပါဝငျပတျသကျနတေဲ့ ဆီငှပြေံ့ စနဈဆိုတဲ့ အကွောငျးပါထညျ့သှငျးပွောမှရပါမယျ။ ဒီ ဆီငှပြေံ့စနဈကို EVAP (Evaporative Emission Control System) လို့ချေါပါတယျ။ ဒီ EVAP လို့ချေါတဲ့ စနဈကွီးက အခုခတျေပျေါ ဓာတျဆီကားအငျဂငျြတပျထားတဲ့ ကားတိုငျးလိုလိုမှာပါဝငျပါတယျ။ ကားမှာအသုံးပွုနတေဲ့ ဓာတျဆီရဲ့ဂုဏျသတ်တိတှကေတော့
အရောငျမရှိ၊ ထှငျးဖောကျမွငျနိုငျသညျ၊ အနံ့အနညျးငယျသငျးပြံ့ညျ။
မီးစတငျလောငျကြှမျးရနျ အနိမျ့ဆုံးသော အပူခြိနျလိုအပျခကျြ (Flash Point) = -10 to -15° C (or) 14 to 15° F
နိပျသောသိပျသညျးဆ (0.60 to 0.78)
အပူခြိနျပမာဏ (9,500 to 10,500 Kcal / Kg or 4,300 to 4800 Kcal / lb)
အေးနသေောအငျဂငျြကို စတငျနှိုးခြိနျတှငျ လနှေငျ့ဆီရောနှောမှုလှယျကူစရေနျလှယျကူသော အငှပြေံ့စှမျးရညျရှိသညျ။
ဒီတော့ ကားတိုငျးလိုလိုမှာ အသုံးပွုနတေဲ့ဓာတျဆီတှဟော လထေုထဲကို အကွောငျးအမြိုးမြိုးနဲ့ အငှပြေံ့ထှကျပါတယျ။ ဒီလိုအငှပြေံ့ထှကျတဲ့ ဓာတျဆီတှမှော Emission ဆိုတဲ့ လထေုညဈညမျးမှုတှဖွေဈစပေါတယျ။
ဆီတိုငျကီလို့ချေါတဲ့ ဓာတျဆီတိုငျကီထဲမှာရှိတဲ့ ဆီတှကေလညျး ဆီတိုငျကီထဲမှာ အခြိနျတိုငျး အငှပြေံ့နကွေပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကားမှာရှိတဲ့ ဆီပေးဝရေေးစနဈတဈခုခု ခြို့ယှငျးယိုစိမျ့တာနဲ့
အဲဒီ ဓာတျဆီတှဟော အငှပြေံ့ထှကျပွီး လထေုထဲကိုရောကျလာပါတော့တယျ။ ကမ်ဘာ့လထေု ညဈညမျးမှု တိုငျးတာခကျြတှအေရ လထေုညဈညမျးမှုရဲ့ 20% ကိုမျောတျောကားတှကေနဖွေဈပျေါစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီ အမွဲအငှပြေံ့ဖို့ခြောငျးနတေဲ့ ဓာတျဆီငှတှေ့ကေိုထိနျးခြုပျဖို့ နညျးစနဈတှကေိုတီထှငျဖနျတီးရငျးနဲ့ ဒီလို EVAP System ဆိုတဲ့ စနဈကွီးရယျ၊ ကားအငျဂငျြခနျးထဲက ပုံစံအမြိုးမြိုး နရောအမြိုးမြိုးမှာရှိတတျတဲ့ အမဲရောငျဘူးတှရေယျ ဖွဈပျေါလာရတာပါ။
EVAP System မှာ ဘာတှပေါဝငျသလဲ?
EVAP System ကို 1996 နောကျပိုငျးကားတှမှော စတငျအသုံးပွုလာကွပွီး၊ ဒီ EVAP system နဲ့ တှဲဖကျ အလုပျလုပျတဲ့ ပစ်စညျးတှကေတော့
Fuel Tank (ဆီတိုငျကီ) ကတော့ ပုံမှနျအားဖွငျ့ ဓာတျဆီတှကေို သိုလှောငျဖို့အနနေဲ့ အသုံးပွုပါတယျ။ နောကျတဈခကျြ ဓာတျဆီတိုငျကီနဲ့ပတျသကျပွီး သိထားသငျ့တာတဈခုက၊ ခရီးသှားတော့မယျဆိုရငျ ဆီတိုငျကီ ကို ဆီအပွညျ့ထညျ့တာမြိုး မလုပျသငျ့ပါ။ တျောတျောမြားမြားမွငျနတောက ကားနဲ့ခရီးသှားတော့မယျမို့ ဆီဖွညျ့ဖို့လိုလာပွီဆိုရငျ ဆီအပွညျ့ဖွညျ့တဲ့အပွငျ ကားကို လှုပျပါထညျ့တာမွငျနရေပါတယျ။ ဒါမြိုးမလုပျဖို့လိုပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျတော့ ဆီတိုငျကီထဲမှာရှိတဲ့ ဓာတျဆီတှဟော အငှပြေံ့မှာမို့ အငှပြေံ့တဲ့အခါ အဲဒီအငှတှေ့နေဖေို့ နရောလှတျတခုလိုအပျပါတယျ။ အဲဒီလိုမှမဟုတျရငျ ဒီ ဆီငှပွေ့နျစနဈကို မလိုအပျတဲ့ တှနျးအားဖွဈစပွေီး ဆီငှယေို့စိမျ့မှုတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နိုငျငံခွားက ဓာတျဆီဆိုငျတှမှောဆို ဓာတျဆီဖွညျ့လို့ ပွညျ့တော့မယျဆိုရငျ အလိုလြောကျ ပနျ့ကို ပိတျတဲ့ စနဈတှကေို အသုံးပွုထားပါတယျ။
Gas Cap (ဆီတိုငျကီ အဖုံး) ဆီတိုငျကီ အဖုံးကလညျး ဒီ EVAP System နဲ့ တှဲဖကျ အလုပျလုပျတဲ့ ပစ်စညျးတှထေဲ ပါဝငျပါတယျ။ ဆီတိုငျကီ အဖုံးမလုံတာ၊ ဆီတိုငျကီ အဖုံး 'ဟ' နတောတှကွေောငျ့လညျး ဆီငှပြေံ့စနဈထဲ လတှေပေါဝငျလာပွီး အငျဂငျြခကျြမီးလငျးတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဆီဖွညျ့ပွီးလို့ ဆီတိုငျကီအဖုံးပိတျမယျဆိုရငျ “ကလဈ ကလဈ” ဆိုတဲ့ အသံကွားတဲ့ အထိ ပိတျဖို့လိုအပျပါတယျ။
Charcoal Canister (ဆီငှပြေံ့ဘူး) ဆီပွနျဘူးလို့ အမြားချေါနတေဲ့ ဟာကို ချေါတာပါ။ အမဲရောငျ လေးထောငျပုံစံ ဒါမှမဟုတျ အဝိုငျးပုံစံနဲ့ ရှိတတျပွီး မြားသောအားဖွငျ့ ပလတျစတဈနဲ့ပွုလုပျထားတာပါ။ တခြို့ကားတှမှောတော့ စတီးနဲ့ ပွုလုပျထားပွီး ကားရဲ့အငျဂငျြခနျး ထောငျ့နရောလားတှမှော တပျဆငျထားတာပါ။ ဒီကောငျလေးက တကယျတော့ ကြောကျမီးသှေးဘူးလေးပါ။ ဒီဘူးလေးထဲမှာ ကြောကျမီးသှေး ပေါငျ 1lb ကနေ 2lb အထိ ထညျ့ထားပွီး ဒီထဲမှာပါတဲ့ ကြောကျမီးသှေးတှကေ ဆီတိုငျကီထဲနေ အငှပြေံ့ထှကျလာတဲ့ ဓာတျဆီအငှတှေ့ကေို ဖမျးယူသိုလှောငျထားပါတယျ။ ဘယျအခြိနျထိ သိုလှောငျထားသလဲဆိုရငျတော့ ကားစကျမနှိုးထားတဲ့ အခြိနျတှရေယျ၊ ကားအငျဂငျြမပူသေးတဲ့ အခြိနျတှရေယျ၊ ကားစပွီးမမောငျးသေးတဲ့ အခြိနျတှရေယျမှာ ဆီငှတှေ့ကေို ဒီဘူးလေးထဲမှာ သိုလှောငျထားပေးပါတယျ။
Vapor - Liquid Separator (ဆီငှနေဲ့ ဆီအရညျကို ခှဲခွားပေးတဲ့ပစ်စညျး) ဒီကောငျလေးကတော့ ဆီငှနေဲ့ ဆီအရညျကို ခှဲခွားပေးတဲ့အရာလေးပါ။ EVAP canister ကို သှားတဲ့လိုငျးထဲမှာ ပါဝငျလာတဲ့ ဓာတျဆီအရညျနဲ့ အငှတှေ့ကေို သီးသနျ့စီခှဲထုတျပေးတာမြိုးပါ။ ဒီလိုမှ မဟုတျဘဲ Canister (ဆီငှသေို့လှောငျဘူး) ထဲ ဆီအရညျတှရေောကျသှားရငျ Canister ကို အလှယျတကူပွညျ့လြှံပွီး ပကျြစီးစမှောဖွဈပါတယျ။
Vent Control Valve – ဒီ Valve ကတော့ Canister နဲ့ကပျလကျြမှာတညျရှိပွီး ပွငျပမှာရှိတဲ့ လတှေေ Canister ထဲကို ဝငျနိုငျအောငျလုပျပေးတဲ့ Valve လေးပဲဖွဈပါတယျ ။
Purge Valve / Sensor – ဒီ Valve ကတော့ ဆီငှသေို့လှောငျဘူး ကနေ Intake Manifold ဒါမှမဟုတျ Throttle Body လတေံခါး သှားတဲ့လမျးကွောငျးမှာ ကွားခံအဖွဈတပျဆငျထားတဲ့ Valve လေးပါ။
Fuel Tank Pressure Sensor – ဒီ ဆနျဆာကတော့ ဓာတျဆီတိုငျကီထဲမှာ ဖိအားဘယျလောကျမြားနပွေီလဲ နညျးနပွေီလဲ တိုငျးတာတဲ့ အလုပျကိုလုပျပါတယျ။ ဆီတိုငျကီထဲမှာ ဆီဖိအား နညျးလို့လညျးမရသလို၊ မြားလှနျးလို့လညျး အန်တရာယျရှိပါတယျ။
Fuel Level Sensor - ဆီတိုငျကီထဲမှာရှိတဲ့ ဆီ Level ပမာဏအနညျးအမြားကို တိုငျးတာပေးတဲ့ အလုပျကို လုပျဆောငျပါတယျ။
EVAP System ဘယျလို အလုပျလုပျသလဲ?
EVAP System တဈခု အလုပျလုပျပုံနညျးစနဈတှကေတော့ ကားအမြိုးအစား၊ မျောဒယျ အမြိုးမြိုး ထုတျလုပျတဲ့ နှဈအပျေါမူတညျပွီးပုံစံဒီဇိုငျးအမြိုးမြိုးရှိပမေဲ့ အခွခေံ လုပျဆောငျပုံတှကေတော့ တူတူပါပဲ။
ဒီစနဈမှာ အဓိက တာဝနျထမျးဆောငျတာကတော့ Purge Valve ရယျ၊ Vent Valve ရယျ၊ Fuel Tank Pressure Sensor ရယျပါပဲ။ Purge Valve ရယျ၊ Vent Valve တှရေယျကို Solenoid Valve တှအေဖွဈတပျဆငျထားပွီး PCM လို့ချေါတဲ့ Powertrain Control Module ကနေ မောငျးနှငျပါတယျ။
ယဘေူယအြားဖွငျ့ ဆီတိုငျကီထဲကို ဆီဖွညျ့ထားပွီး ဒီအတိုငျး ကားမမောငျးခငျ အခွအေနမှော Vent Valve တှကေ Normally Open ဆိုတဲ့ ပုံမှနျပှငျ့နတေဲ့ အခွအေတိုငျးရှိနပွေီး ပွငျပက လတှေေ Charcoal Canister ဆိုတဲ့ ဆီငှပြေံ့ဘူးထဲကို ဝငျနိုငျတဲ့အခွအေနဖွေဈနပေါတယျ။ ဒီအခွအေနမှော Purge Valve က Normally Close ဆိုတဲ့ အခွအေနအေတိုငျး ပိတျလကျြရှိနပွေီး Charcoal Canister ထဲမှာ ဆီတိုငျကီကနလောတဲ့ အငှပြေံ့နတေဲ့ ဆီငှတှေ့ကေို စုစညျးသိုလှောငျထားပါတယျ။
ကားစကျနှိုးပွီး မောငျးနှငျလို့ Normally Operation Temperature ရောကျပွီဆိုတဲ့အခြိနျ ဆီတိုငျကီမှာ တပျဆငျထားတဲ့ Fuel Tank Pressure Sensor ရဲ့ အာရုံခံခကျြအရ ဆီတိုငျကီထဲမှာ ဆီငှပြေံ့မှုတှမြေားလာတယျဆိုတာကို PCM ကို လှမျးသတငျးပေးပို့ပါတယျ။ PCM ကနေ ပွငျပကနေ ဆီငှပြေံ့ဘူးထဲကို ဝငျနတေဲ့ Vent Valve ကို လှမျးပိတျလိုကျပါတယျ။ ပွီးတာနဲ့ Purge Valve ကို ဖှငျ့ပေးပွီး ဆီငှဘေူ့းထဲမှာ စုစညျးမိနတေဲ့ ဆီငှတှေ့ကေို Inlet ထဲ ဒါမှမဟုတျ Throttle Body ဆိုတဲ့ လတေံခါးထဲ ဝငျရောကျစပွေီး အငျဂငျြခနျးထဲရောကျ မီးလောငျကြှမျးစပေါတယျ။
Fuel Tank ထဲမှာ ဆီငှပြေံ့မှုတှနေညျးပါးလာပွီဆို Purge Valve ကို ပွနျပိတျ ၊ Vent Valve ကို ပွနျဖှငျ့ အစရှိသဖွငျ့ ဆီငှတှေ့ကေို Canister ထဲမှာ ပွနျလညျသိုလှောငျစပေါတယျ။ ဒီလို အခွခေံနညျးစနဈနဲ့ EVAP system ကွီးတဈခုလညျပတျပါတယျ။ ကားထုတျလုပျတဲ့ ကုမ်ပဏီတှရေဲ့ နညျးပညာအမြိုးအစား မျောဒယျအမြိုးအစားတှကေိုလိုကျပွီး Valve အဖှငျ့အပိတျပုံစံ၊ လအေဝငျအထှကျပုံစံ၊ ဆီငှသေို့လှောငျမှုပုံစံတှတေော့ ကှာခွားတတျပါတယျ။
EVAP System ခြို့ယှငျးမှုတှဖွေဈရငျ ဘာတှဖွေဈနိုငျသလဲ?
EVAP System မှာရှိတဲ့ Fuel Tank ၊ Fuel Cap ၊ Fuel Pressure Sensor ၊ Vent Valve ၊ Purge Valve တှမှော တဈခုခု ခြို့ယှငျးမှုဖွဈတယျဆိုရငျ
အငျဂငျြစစနှိုးခွငျး (Slow) idle မမှနျတာ၊ စလိုးကွမျးတာ၊ စကျထိုးသသှေားတာ၊ ဆီစားမြားတာ
လီဘာနငျးလိုကျတဲ့အခြိနျ တုံဆိုငျးဆိုငျးဖွဈတာတှေ ဖွဈပျေါလာတတျပါတယျ။
EVAP System နဲ့ပတျသကျပွီး အဖွဈမြားဆုံး ပွဿနာအရငျးမွဈတှကေတော့ ဆီတိုငျကီအဖုံးမလုံတာ၊ ဆီဖွညျ့ပွီး ပိတျတဲ့ခြိနျ လော့မကတြာ၊ EVAP မှာရှိတဲ့ ပိုကျလိုငျးတှေ ပကျြတာ၊ ပေါကျတာ၊ Purge Valve ပကျြစီးတာ၊ Vent Valve ပကျြစီးတာ၊ Purge Valve ၊ Vent Valve တှကေို Control လုပျတဲ့ Wiring Lines တှေ ပကျြစီးတာ အစရှိတဲ့ ပွဿနာတှအေဖွဈမြားပါတယျ။ ဒီလိုပွဿနာတှဖွေဈလာရငျတော့ အငျဂငျြခကျြမီးလငျးလာတတျပွီး OBD2 Diagnostic စကျမြားနဲ့ ပွဈခကျြရှာဖှေ ပွုပွငျရမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါကတော့ ကားအငျဂငျြခနျးထဲမှာ မီးလောငျတတျတယျဆိုပွီး ဟိုနရောရှေ့ ဒီနရောရှေ့ ရှပွေ့ောငျးတတျကွပွီး အလုပျလုပျပုံလူသိနညျးတဲ့ အမဲရောငျဘူး Charcoal Canister နဲ့ သူရဲ့ EVAP System ရယျ သူနဲ့ဆကျစပျဖွဈပကျြတတျတဲ့ ပွဿနာတှအေကွောငျးရယျပါပဲ။ နောကျတဈခကျြက Probox တှမှောပါတဲ့ ဒီဘူးကွောငျ့ မီးလောငျတယျဆိုတာကတော့ ဒီ Canister ဘူးကွောငျ့လို တိကတြဲ့ Indicator စဈတမျးတဈခုမရှိသေးပါဘူး။ ဝပျရှော့ဆရာတှရေဲ့ မီးလောငျရတဲ့ အကွောငျးကို ခနျ့မှနျးမိသလောကျ ဖွဈနိုငျခွအေရ ဟိုနရော ဒီနရော လိုကျရှပွေ့ောငျးနကွေတာမြိုးပါ။ တဈကြောငျးတဈရှာ တဈဂါထာ တဈပုဒျဆနျး ဆိုသလိုပါပဲခငျဗြာ။
စာဖတျသူ မိတျဆှေ ညီအဈကိုမောငျနှမအားလုံး နညျးပညာ ဗဟုသုတ ကွှယျဝကွပါစေ။ ။
ကားအင်ဂျင်ခန်းထဲက ဆီငွေ့ပြန်ဘူးနဲ့ ဆီငွေ့ပျံ စနစ်အကြောင်း
Probox ကားတွေ ဟိုနေရာ မီးလောင်၊ ဒီနေရာ မီးလောင်တယ် ကြားတော့ Probox ကားပိုင်ရှင်တွေ၊ ကားမောင်းသူတွေ၊ ကားအင်ဂျင်ခန်းထဲက ဆီပြန်ဘူးလို့ခေါ်တဲ့ ဘူးအမဲလေးကို အိတ်ဇောပိုက်နဲ့ နီးတဲ့နေရာကနေ ဝေးတဲ့နေရာတွေ လာလာရွှေ့ကြတယ်ဗျ ။
ဒီနေ့ ကားအင်ဂျင်ခန်းထဲက ဟိုနေရာ ဒီနေရာရွှေ့တတ်ကြတဲ့ အမဲရောင်ဘူးလေး နဲ့ သူ့စနစ် အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ ကားအင်ဂျင်ခန်းထဲက အမဲရောင်ဘူးလေးကို ဝပ်ရှော့ဆရာအများစုကတော့ ဆီပြန်ဘူး၊ ဆီငွေ့ပြန်ဘူးလို့ခေါ်ကြတယ်ဗျ (ဆီအငွေ့တွေ ပြန်လာတယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ပါ)။ ဆီ​​ငွေ့ပျံဘူးဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။
EVAP System အကြောင်း
ဒီဆီငွေ့ပြန်ဘူးလေး အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် သူနဲ့အတူပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ ဆီငွေ့ပျံ စနစ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါထည့်သွင်းပြောမှရပါမယ်။ ဒီ ဆီငွေ့ပျံစနစ်ကို EVAP (Evaporative Emission Control System) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီ EVAP လို့ခေါ်တဲ့ စနစ်ကြီးက အခုခေတ်ပေါ် ဓာတ်ဆီကားအင်ဂျင်တပ်ထားတဲ့ ကားတိုင်းလိုလိုမှာပါဝင်ပါတယ်။ ကားမှာအသုံးပြုနေတဲ့ ဓာတ်ဆီရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကတော့
အငွေ့ပျံလွယ်သည်၊ ပုံမှန်အပူချိန်တွင် လွယ်ကူစွာ အငွေ့ပျံသည်။
အရောင်မရှိ၊ ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်သည်၊ အနံ့အနည်းငယ်သင်းပျံ့သည်။
မီးစတင်လောင်ကျွမ်းရန် အနိမ့်ဆုံးသော အပူချိန်လိုအပ်ချက် (Flash Point) = -10 to -15° C (or) 14 to 15° F
နိပ်သောသိပ်သည်းဆ (0.60 to 0.78)
အပူချိန်ပမာဏ (9,500 to 10,500 Kcal / Kg or 4,300 to 4800 Kcal / lb)
အေးနေသောအင်ဂျင်ကို စတင်နှိုးချိန်တွင် လေနှင့်ဆီရောနှောမှုလွယ်ကူစေရန်လွယ်ကူသော အငွေ့ပျံစွမ်းရည်ရှိသည်။
ဒီတော့ ကားတိုင်းလိုလိုမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ဓာတ်ဆီတွေဟာ လေထုထဲကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အငွေ့ပျံထွက်ပါတယ်။ ဒီလိုအငွေ့ပျံထွက်တဲ့ ဓာတ်ဆီတွေမှာ Emission ဆိုတဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။
ဆီတိုင်ကီလို့ခေါ်တဲ့ ဓာတ်ဆီတိုင်ကီထဲမှာရှိတဲ့ ဆီတွေကလည်း ဆီတိုင်ကီထဲမှာ အချိန်တိုင်း အငွေ့ပျံနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကားမှာရှိတဲ့ ဆီပေးဝေရေးစနစ်တစ်ခုခု ချို့ယွင်းယိုစိမ့်တာနဲ့
အဲဒီ ဓာတ်ဆီတွေဟာ အငွေ့ပျံထွက်ပြီး လေထုထဲကိုရောက်လာပါတော့တယ်။ ကမ္ဘာ့လေထု ညစ်ညမ်းမှု တိုင်းတာချက်တွေအရ လေထုညစ်ညမ်းမှုရဲ့ 20% ကိုမော်တော်ကားတွေကနေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ အမြဲအငွေ့ပျံဖို့ချောင်းနေတဲ့ ဓာတ်ဆီငွေ့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ နည်းစနစ်တွေကိုတီထွင်ဖန်တီးရင်းနဲ့ ဒီလို EVAP System ဆိုတဲ့ စနစ်ကြီးရယ်၊ ကားအင်ဂျင်ခန်းထဲက ပုံစံအမျိုးမျိုး နေရာအမျိုးမျိုးမှာရှိတတ်တဲ့ အမဲရောင်ဘူးတွေရယ် ဖြစ်ပေါ်လာရတာပါ။
EVAP System မှာ ဘာတွေပါဝင်သလဲ?
EVAP System ကို 1996 နောက်ပိုင်းကားတွေမှာ စတင်အသုံးပြုလာကြပြီး၊ ဒီ EVAP system နဲ့ တွဲဖက် အလုပ်လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့
Fuel Tank (ဆီတိုင်ကီ) ကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် ဓာတ်ဆီတွေကို သိုလှောင်ဖို့အနေနဲ့ အသုံးပြုပါတယ်။ နောက်တစ်ချက် ဓာတ်ဆီတိုင်ကီနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိထားသင့်တာတစ်ခုက၊ ခရီးသွားတော့မယ်ဆိုရင် ဆီတိုင်ကီ ကို ဆီအပြည့်ထည့်တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါ။ တော်တော်များများမြင်နေတာက ကားနဲ့ခရီးသွားတော့မယ်မို့ ဆီဖြည့်ဖို့လိုလာပြီဆိုရင် ဆီအပြည့်ဖြည့်တဲ့အပြင် ကားကို လှုပ်ပါထည့်တာမြင်နေရပါတယ်။ ဒါမျိုးမလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ ဆီတိုင်ကီထဲမှာရှိတဲ့ ဓာတ်ဆီတွေဟာ အငွေ့ပျံမှာမို့ အငွေ့ပျံတဲ့အခါ အဲဒီအငွေ့တွေနေဖို့ နေရာလွတ်တခုလိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ဒီ ဆီငွေ့ပြန်စနစ်ကို မလိုအပ်တဲ့ တွန်းအားဖြစ်စေပြီး ဆီငွေ့ယိုစိမ့်မှုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံခြားက ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေမှာဆို ဓာတ်ဆီဖြည့်လို့ ပြည့်တော့မယ်ဆိုရင် အလိုလျောက် ပန့်ကို ပိတ်တဲ့ စနစ်တွေကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
Gas Cap (ဆီတိုင်ကီ အဖုံး) ဆီတိုင်ကီ အဖုံးကလည်း ဒီ EVAP System နဲ့ တွဲဖက် အလုပ်လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆီတိုင်ကီ အဖုံးမလုံတာ၊ ဆီတိုင်ကီ အဖုံး 'ဟ' နေတာတွေကြောင့်လည်း ဆီငွေ့ပျံစနစ်ထဲ လေတွေပါဝင်လာပြီး အင်ဂျင်ချက်မီးလင်းတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆီဖြည့်ပြီးလို့ ဆီတိုင်ကီအဖုံးပိတ်မယ်ဆိုရင် “ကလစ် ကလစ်” ဆိုတဲ့ အသံကြားတဲ့ အထိ ပိတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Charcoal Canister (ဆီငွေ့ပျံဘူး) ဆီပြန်ဘူးလို့ အများခေါ်နေတဲ့ ဟာကို ခေါ်တာပါ။ အမဲရောင် လေးထောင်ပုံစံ ဒါမှမဟုတ် အဝိုင်းပုံစံနဲ့ ရှိတတ်ပြီး များသောအားဖြင့် ပလတ်စတစ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာပါ။ တချို့ကားတွေမှာတော့ စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး ကားရဲ့အင်ဂျင်ခန်း ထောင့်နေရာလားတွေမှာ တပ်ဆင်ထားတာပါ။ ဒီကောင်လေးက တကယ်တော့ ကျောက်မီးသွေးဘူးလေးပါ။ ဒီဘူးလေးထဲမှာ ကျောက်မီးသွေး ပေါင် 1lb ကနေ 2lb အထိ ထည့်ထားပြီး ဒီထဲမှာပါတဲ့ ကျောက်မီးသွေးတွေက ဆီတိုင်ကီထဲနေ အငွေ့ပျံထွက်လာတဲ့ ဓာတ်ဆီအငွေ့တွေကို ဖမ်းယူသိုလှောင်ထားပါတယ်။ ဘယ်အချိန်ထိ သိုလှောင်ထားသလဲဆိုရင်တော့ ကားစက်မနှိုးထားတဲ့ အချိန်တွေရယ်၊ ကားအင်ဂျင်မပူသေးတဲ့ အချိန်တွေရယ်၊ ကားစပြီးမမောင်းသေးတဲ့ အချိန်တွေရယ်မှာ ဆီငွေ့တွေကို ဒီဘူးလေးထဲမှာ သိုလှောင်ထားပေးပါတယ်။
Vapor - Liquid Separator (ဆီငွေ့နဲ့ ဆီအရည်ကို ခွဲခြားပေးတဲ့ပစ္စည်း) ဒီကောင်လေးကတော့ ဆီငွေ့နဲ့ ဆီအရည်ကို ခွဲခြားပေးတဲ့အရာလေးပါ။ EVAP canister ကို သွားတဲ့လိုင်းထဲမှာ ပါဝင်လာတဲ့ ဓာတ်ဆီအရည်နဲ့ အငွေ့တွေကို သီးသန့်စီခွဲထုတ်ပေးတာမျိုးပါ။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ Canister (ဆီငွေ့သိုလှောင်ဘူး) ထဲ ဆီအရည်တွေရောက်သွားရင် Canister ကို အလွယ်တကူပြည့်လျှံပြီး ပျက်စီးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Vent Control Valve – ဒီ Valve ကတော့ Canister နဲ့ကပ်လျက်မှာတည်ရှိပြီး ပြင်ပမှာရှိတဲ့ လေတွေ Canister ထဲကို ဝင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ Valve လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။
Purge Valve / Sensor – ဒီ Valve ကတော့ ဆီငွေ့သိုလှောင်ဘူး ကနေ Intake Manifold ဒါမှမဟုတ် Throttle Body လေတံခါး သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာ ကြားခံအဖြစ်တပ်ဆင်ထားတဲ့ Valve လေးပါ။
Fuel Tank Pressure Sensor – ဒီ ဆန်ဆာကတော့ ဓာတ်ဆီတိုင်ကီထဲမှာ ဖိအားဘယ်လောက်များနေပြီလဲ နည်းနေပြီလဲ တိုင်းတာတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်။ ဆီတိုင်ကီထဲမှာ ဆီဖိအား နည်းလို့လည်းမရသလို၊ များလွန်းလို့လည်း အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
Fuel Level Sensor - ဆီတိုင်ကီထဲမှာရှိတဲ့ ဆီ Level ပမာဏအနည်းအများကို တိုင်းတာပေးတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
EVAP System ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ?
EVAP System တစ်ခု အလုပ်လုပ်ပုံနည်းစနစ်တွေကတော့ ကားအမျိုးအစား၊ မော်ဒယ် အမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်တဲ့ နှစ်အပေါ်မူတည်ပြီးပုံစံဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့ အခြေခံ လုပ်ဆောင်ပုံတွေကတော့ တူတူပါပဲ။
ဒီစနစ်မှာ အဓိက တာဝန်ထမ်းဆောင်တာကတော့ Purge Valve ရယ်၊ Vent Valve ရယ်၊ Fuel Tank Pressure Sensor ရယ်ပါပဲ။ Purge Valve ရယ်၊ Vent Valve တွေရယ်ကို Solenoid Valve တွေအဖြစ်တပ်ဆင်ထားပြီး PCM လို့ခေါ်တဲ့ Powertrain Control Module ကနေ မောင်းနှင်ပါတယ်။
ယေဘူယျအားဖြင့် ဆီတိုင်ကီထဲကို ဆီဖြည့်ထားပြီး ဒီအတိုင်း ကားမမောင်းခင် အခြေအနေမှာ Vent Valve တွေက Normally Open ဆိုတဲ့ ပုံမှန်ပွင့်နေတဲ့ အခြေအတိုင်းရှိနေပြီး ပြင်ပက လေတွေ Charcoal Canister ဆိုတဲ့ ဆီငွေ့ပျံဘူးထဲကို ဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ Purge Valve က Normally Close ဆိုတဲ့ အခြေအနေအတိုင်း ပိတ်လျက်ရှိနေပြီး Charcoal Canister ထဲမှာ ဆီတိုင်ကီကနေလာတဲ့ အငွေ့ပျံနေတဲ့ ဆီငွေ့တွေကို စုစည်းသိုလှောင်ထားပါတယ်။
ကားစက်နှိုးပြီး မောင်းနှင်လို့ Normally Operation Temperature ရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန် ဆီတိုင်ကီမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Fuel Tank Pressure Sensor ရဲ့ အာရုံခံချက်အရ ဆီတိုင်ကီထဲမှာ ဆီငွေ့ပျံမှုတွေများလာတယ်ဆိုတာကို PCM ကို လှမ်းသတင်းပေးပို့ပါတယ်။ PCM ကနေ ပြင်ပကနေ ဆီငွေ့ပျံဘူးထဲကို ဝင်နေတဲ့ Vent Valve ကို လှမ်းပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ Purge Valve ကို ဖွင့်ပေးပြီး ဆီငွေ့ဘူးထဲမှာ စုစည်းမိနေတဲ့ ဆီငွေ့တွေကို Inlet ထဲ ဒါမှမဟုတ် Throttle Body ဆိုတဲ့ လေတံခါးထဲ ဝင်ရောက်စေပြီး အင်ဂျင်ခန်းထဲရောက် မီးလောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။
Fuel Tank ထဲမှာ ဆီငွေ့ပျံမှုတွေနည်းပါးလာပြီဆို Purge Valve ကို ပြန်ပိတ် ၊ Vent Valve ကို ပြန်ဖွင့် အစရှိသဖြင့် ဆီငွေ့တွေကို Canister ထဲမှာ ပြန်လည်သိုလှောင်စေပါတယ်။ ဒီလို အခြေခံနည်းစနစ်နဲ့ EVAP system ကြီးတစ်ခုလည်ပတ်ပါတယ်။ ကားထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ နည်းပညာအမျိုးအစား မော်ဒယ်အမျိုးအစားတွေကိုလိုက်ပြီး Valve အဖွင့်အပိတ်ပုံစံ၊ လေအဝင်အထွက်ပုံစံ၊ ဆီငွေ့သိုလှောင်မှုပုံစံတွေတော့ ကွာခြားတတ်ပါတယ်။
EVAP System ချို့ယွင်းမှုတွေဖြစ်ရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ?
EVAP System မှာရှိတဲ့ Fuel Tank ၊ Fuel Cap ၊ Fuel Pressure Sensor ၊ Vent Valve ၊ Purge Valve တွေမှာ တစ်ခုခု ချို့ယွင်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်
Engine Check မီးလင်းတာ
အင်ဂျင်စစနှိုးခြင်း (Slow) idle မမှန်တာ၊ စလိုးကြမ်းတာ၊ စက်ထိုးသေသွားတာ၊ ဆီစားများတာ
လီဘာနင်းလိုက်တဲ့အချိန် တုံဆိုင်းဆိုင်းဖြစ်တာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
EVAP System နဲ့ပတ်သက်ပြီး အဖြစ်များဆုံး ပြဿနာအရင်းမြစ်တွေကတော့ ဆီတိုင်ကီအဖုံးမလုံတာ၊ ဆီဖြည့်ပြီး ပိတ်တဲ့ချိန် လော့မကျတာ၊ EVAP မှာရှိတဲ့ ပိုက်လိုင်းတွေ ပျက်တာ၊ ပေါက်တာ၊ Purge Valve ပျက်စီးတာ၊ Vent Valve ပျက်စီးတာ၊ Purge Valve ၊ Vent Valve တွေကို Control လုပ်တဲ့ Wiring Lines တွေ ပျက်စီးတာ အစရှိတဲ့ ပြဿနာတွေအဖြစ်များပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်လာရင်တော့ အင်ဂျင်ချက်မီးလင်းလာတတ်ပြီး OBD2 Diagnostic စက်များနဲ့ ပြစ်ချက်ရှာဖွေ ပြုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ကားအင်ဂျင်ခန်းထဲမှာ မီးလောင်တတ်တယ်ဆိုပြီး ဟိုနေရာရွှေ့ ဒီနေရာရွှေ့ ရွှေ့ပြောင်းတတ်ကြပြီး အလုပ်လုပ်ပုံလူသိနည်းတဲ့ အမဲရောင်ဘူး Charcoal Canister နဲ့ သူရဲ့ EVAP System ရယ် သူနဲ့ဆက်စပ်ဖြစ်ပျက်တတ်တဲ့ ပြဿနာတွေအကြောင်းရယ်ပါပဲ။ နောက်တစ်ချက်က Probox တွေမှာပါတဲ့ ဒီဘူးကြောင့် မီးလောင်တယ်ဆိုတာကတော့ ဒီ Canister ဘူးကြောင့်လို တိကျတဲ့ Indicator စစ်တမ်းတစ်ခုမရှိသေးပါဘူး။ ဝပ်ရှော့ဆရာတွေရဲ့ မီးလောင်ရတဲ့ အကြောင်းကို ခန့်မှန်းမိသလောက် ဖြစ်နိုင်ခြေအရ ဟိုနေရာ ဒီနေရာ လိုက်ရွှေ့ပြောင်းနေကြတာမျိုးပါ။ တစ်ကျောင်းတစ်ရွာ တစ်ဂါထာ တစ်ပုဒ်ဆန်း ဆိုသလိုပါပဲခင်ဗျာ။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမအားလုံး နည်းပညာ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝကြပါစေ။ ။